पछिल्लो समय निकै भाइरल भएकी ५९ बर्षिय रानु मण्डलको यस्तो मेकअप कसले गरिदियो ? सामाजिक सञ्जाल भरि ट्रोल… – Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /समाचार/पछिल्लो समय निकै भाइरल भएकी ५९ बर्षिय रानु मण्डलको यस्तो मेकअप कसले गरिदियो ? सामाजिक सञ्जाल भरि ट्रोल…
एजेन्सी। रेलवे स्टेशनमा गीत गाएर जीवन चलाउदै आएकी ५९ वर्षीय रानु मण्डल एकाएक भाइरल बनिन उनको जादुमय आवाजले । बलिउडमा सबैको नजर उनि तिरै तानिएको थियो । उनको गायकीलाई लिएर निकैले तारिफ गरे ।
सामान्य जीवनशैली एकाएक परिवर्तन हुदै उनि अहिले निकै चर्चामा छिन । तर,अहिले पछिल्लो समय एक फोटोसुटले झनै चर्चामा आइन । कारण हो उनको सिंगार । अनुहारमा चाहिने भन्दा धेरै सिंगार (मेकअप) पटारले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको शिकार भएकी छिन । उनका फ्यानहरुले अनेक किसिमका टिक्का टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः अनु मलिकलाई सोनाको सुझाव : ‘से क्स रिह्‍याब’मा जानु….बलिउड चर्चित इन्डियन आइडलका जज तथा म्युजिक कम्पोजर अनु मलिक एक विवादमा फसेका छन् । गायिका सोना मोहपात्राले हालै उनीमाथि यौ न दु व्र्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन् । सोनाले अनुलाई यौ न दु व्र्यवहारको आरोप लगाउँदै खुलापत्र नै लेखेकी थिइन् ।
अनुले पनि खुलापत्र लेखेरै सुरुमा त आफ्नो बचाउ गरे । गायिका नेहा भासिन र स्वेता पण्डितले पनि यौ न शो षणको आरोप लगाएपछि विवाद झन् बढेको छ । यस्तो व्यक्ति राष्ट्रिय टेलिभिजनमा ‘बस्न नसुहाउने’, इन्डियन आइडलको जजका रुपमा अनुलाई बस्नु नसुहाउने र अब आराम गर्ने सुझाव दिएकी छिन । साथै भने ‘से क्स रिह्याब’मा जान समेत सुझाव दिएकी छन् ।
खासमा मोहपात्राले ‘मि टु’ अभियान चलेपछि गत वर्ष नै अनुमाथि आरोप लगाएकी थिइन् । उनकै आरोपपछि गत वर्ष इन्डियन आइडलको जजबाट मलिक हटाइएका थिए ।